6 Naizvozvo, tichatii? Toramba tiri muchivi here, kuti mutsa usina kukodzera kuwanwa uwande?+ 2 Izvozvo ngazvirege kumboitika! Zvatakafa kuchivi,+ ticharamba sei tichirarama tiri machiri?+ 3 Kana kuti hamuzivi here kuti isu tose takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu+ takabhabhatidzwa murufu rwake?+ 4 Naizvozvo takavigwa+ pamwe chete naye norubhabhatidzo rwedu murufu rwake, kuti, sokumutswa kwakaitwa Kristu kubva kuvakafa nokubwinya kwaBaba,+ saizvozvo isuwo tinofanira kufamba muupenyu hutsva.+ 5 Nokuti kana tava vakabatana naye murufu rwakafanana norwake,+ chokwadi tichabatanawo naye pakumuka kwakafanana nokwake;+ 6 nokuti tinoziva kuti unhu hwedu hwekare hwakarovererwa pamwe chete naye,+ kuti muviri wedu unotadza ukundikane kuita chero chinhu chipi zvacho,+ kuti tirege kuramba tiri varanda vechivi.+ 7 Nokuti uya anenge afa asunungurwa pachivi chake.+ 8 Zvakare, kana takafa naKristu, tinotenda kuti tichararamawo naye.+ 9 Nokuti tinoziva kuti Kristu, zvino zvaakamutswa kubva kuvakafa,+ haachafi;+ rufu harusisiri tenzi paari. 10 Nokuti rufu rwaakafa, akafa kuchivi kamwe chete zvachose;+ asi upenyu hwaanorarama, anorarama kuna Mwari.+ 11 Saizvozvo nemiwo: chokwadi zvionei semakafa+ kuchivi asi muri vapenyu+ kuna Mwari muna Kristu Jesu. 12 Naizvozvo musarega chivi chichiramba chichiva mambo+ mumiviri yenyu inofa kuti muteerere kuchiva kwayo.+ 13 Uyewo musaramba muchipa nhengo dzenyu kuchivi+ sezvombo zvokusarurama,+ asi imi zvipei kuna Mwari sevaya vari vapenyu+ kubva kune vakafa, uyewo nhengo dzenyu kuna Mwari sezvombo+ zvokururama. 14 Nokuti chivi hachifaniri kuva tenzi pamuri, zvamusiri pasi pomutemo+ asi pasi pomutsa usina kukodzera kuwanwa.+ 15 Zvino zvoitwa sei? Totadza here nokuti hatisi pasi pomutemo+ asi pasi pomutsa usina kukodzera kuwanwa?+ Izvozvo ngazvirege kumboitika! 16 Hamuzivi here kuti kana muchiramba muchizvipa kumunhu sevaranda kuti mumuteerere, muri varanda vake nokuti munomuteerera,+ zvimwe vechivi+ chinotungamirira kurufu+ kana kuti vokuteerera+ kunotungamirira kukururama?+ 17 Asi Mwari ngaaongwe kuti makanga muri varanda vechivi asi makava vanoteerera zvichibva pamwoyo madzidzisiro iwayo amakaiswa kwaari.+ 18 Chokwadi, zvamakasunungurwa+ muchivi, makava varanda+ vokururama.+ 19 Ndiri kutaura sokutaura kunoita vanhu nokuda kwokusasimba kwenyama yenyu:+ nokuti kunyange zvazvo makapa nhengo dzenyu+ kuti dzive varanda vokusachena+ nokusateerera mutemo kunotungamirira kukusateerera mutemo, naizvozvo zvino chipai nhengo dzenyu kuti dzive varanda vokururama kunotungamirira kuutsvene.+ 20 Nokuti pamakanga muri varanda vechivi,+ makanga makasununguka pakururama. 21 Saka, chibereko+ chamaiva nacho panguva iyoyo chii? Zvinhu+ zvamava kunyara nazvo. Nokuti mugumo wezvinhu izvozvo rufu.+ 22 Zvisinei, zvino, nokuti makasunungurwa pachivi mukava varanda vaMwari,+ muri kuwana chibereko+ chebasa renyu munzira youtsvene, uye mugumo wacho upenyu husingaperi.+ 23 Nokuti mubayiro wechivi ndirwo rufu,+ asi chipo+ chinopiwa naMwari achishandisa Kristu Jesu Ishe+ wedu ndihwo upenyu husingaperi.+